Tafakatra 238 izao ny tranga voamarina: valo ireo tratran’ny coronavirus ao Toamasina, ahitana zaza 9 taona | NewsMada
Tafakatra 238 izao ny tranga voamarina: valo ireo tratran’ny coronavirus ao Toamasina, ahitana zaza 9 taona
Mbola any amin’ny faritra Atsinanana hatrany. « Miparitaka ao Toamasina mihitsy ny coronavirus… Tsy zatra manara-dalàna isika… », hoy ny mpitondra tenin’ny CCO, ny Pr Vololontiana Hanta, omaly. Notateriny tamin’izany ny antontanisa ka nahitana tranga vaovao miisa valo, ary any Toamasina avokoa izany. Zaza 9 taona ny zandriny indrindra raha 58 taona ny zokiny amin’izy ireo. Ahitana lehilahy telo sy vehivavy dimy. Tsy nisy tranga vaovao kosa teto Antananarivo tamin’ireo fitiliana natao miisa 91 raha miisa 20 kosa ireo natao izany tany Toamasina.
Sitrana ilay zaza sivy volana tany Toamasina
Etsy andaniny, misy iray ahina noho ny fahasemporana any amin’ny taovam-psefoana ary mbola ampiasana « oxygene ». « Na izany aza, efa tonitony ny toe-pahasalamany… Efa nisy roa hafa koa talohan’io tany Toamasina, saingy efa tafavoaka soa aman-tsara », hoy ihany ny eo anivon’ny CCO.
Na izany aza anefa, nisy sitrana efatra ka anisan’izany ilay zaza vao sivy volana monja, any Toamasina. Tafakatra 112 izany izao ireo efa sitrana sy nalefa nody. Mbola misy 126 ireo tsaboina sy arahi-maso any amin’ny hopitaly. Miisa 238 izany izao ireo tratran’ny coronavirus manerana ny Nosy hatramin’ny 19 marsa no ho mankaty.
Kivy tanteraka ny CCO…
Mbola nanentana hatrany ny eo anivon’ny CCO ny amin’ny tokony hanajana ny fepetra sy ny toromarika. « Kivy aho nahita olona anjatony nirava avy niasa, nifanosona nefa tsy misy fiarovana ny sasany… Mamindra avy hatrany anefa ny olona iray tsy mahalala akory fa mitondra ny soritr’aretina… Tsy mahafaty antoka antsika ny fanajana ny fepetra, indrindra fa ny any Toamasina », hoy ihany ny mpitondra tenin’ny CCO.